Madaxweyne Farmaajo oo ka dhabeeyey balanqaad uu horay u sameeyey. | Radio Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo ka dhabeeyey balanqaad uu horay u sameeyey.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/llahi farmaajo ayaa adkeyey oo mar kale ku celiyey balanqaad uu horay u sameeyey oo ka mid ahaa qudbadii uu isku soo sharaxay ee uu ka hor aqriyey xubniha labada Gole ee Baarlaamka Soomaaliya.
Madaxweyneha Soomaaliya ayaa xili uu xalay ku booqanayey isbitaalka dadkii ku soo waxyeeloobay qarixii shalay ka dhacay Magaalada Muqdisho waxa uu mar labaadku celiyey in qofkii soo sheego Gaari qarax lagu xiray in ay dowlada siin doonto lacag Boqol kun oo Dollar ah.
Sidoo kale Taliyaha Nabadsugida ayaa asagana ku daray in qofkii soo sheega kooxaha weerada ka fuliyo Muqdisho ay siin doonaan lacag Shan kun oo dolar ah asagoo sidoo kale xusay in toban kun oo dolar la siin doono qofkii soo qabto.